विश्वका सबैभन्दा खतरनाक यी ५ जागिरहरु ! हुन्छ यति धेरै तलब (तस्विरसहित) – Medianp
विश्वका सबैभन्दा खतरनाक यी ५ जागिरहरु ! हुन्छ यति धेरै तलब (तस्विरसहित)
Media NPप्रकाशित मिति: बिहिबार, पुष २६, २०७५११:२४0
काठमाडौ । विश्वमा मानिसहरु आफ्नो जिविकोपार्जनको लागी खतरनाक कामहरु गर्न पनि पछि पदैनन् । किनभने मानिसका जिन्दगीमा अनेकौ आवश्यकताहरु हुन्छ । सोही कु्राको पूर्ति गर्नका लागी आफू र आफ्नो परिवारको खुसीका लागी ज्यानको बाजी लगाएर यस्ता कामहरु गर्छन् । त्यसैले सोही अनुसारको कामको यति धेरै सुन्दै अचम्म लाग्ने तलब पाउछन् । त्यसकारण यी ५ जागिरलाई विश्वकै खतरनाक भनिएको हो । हेरौ के के हुन् ?
पहिलो आयल वेल ड्रिलरयो काम विश्वकै खतरनका काम मध्येको एक हो । यसमा आयल वेल ड्रिलरले खानीबाट तेल निकाल्ने काम गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले यस कामको लागि काम गर्ने मानिसहरुले महिनाको लाखौ तलाब पाउछन् ।
दोस्रोमा लोकोमोटिव इन्जीनियरयो पनि विश्वकै खतरनाक जागिर नै हो । किनभने लोकोमोटिव इन्जीनियरले ट्रेनमा हुने इन्जिन बिग्रिएको अवस्थामा मर्मत गर्ने र इन्जिन फेर्नको काम गर्छन् । जुन काम गर्नको लागी धेरै साहसी मान्छेको आवश्यकता पर्दछ । त्यसैले विश्वमा यस्ता काम गर्ने मानिसहरु कमै मात्रामा रहेका छन् । यस कामका लागी मानिसहरुले महिनाको लाखौ तलाब पाउछन् ।
तेस्रोमा डिप सी फिंसिङ यो काम पनि विश्वकै खतरनाक काम नै हो । किनभने डिप सी फिंसिङमा काम गर्ने मानिसहरुले समुन्द्रको बीचमा गएर माछा मार्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यसका काम गर्ने मानिसहरुले महिनाको लाखौ तलाब पाउछन् ।
चौथोमा एयरक्राफ्ट मेकानिकयस काममा पनि विमानको इन्जिन मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले विश्वको खतरनाक काम नै मानिन्छ । किनभने सानो गल्ती भएको मानिसहरुको ज्यान समेत जान सक्छ । त्यसैले यस्तो काम गर्ने मानिसहरुको पनि धेरै पारिश्रमिक पाइन्छ ।
र अन्त्यमा विन्डो ग्लास क्लिनर यो पनि विश्वकै एक खतरनाक काम हो । यसमा धेरै ठुलो ठुलो १० देखि माथि गगनचुम्ने भवनहरुको सिसा सफा गर्नुपर्ने हुन्छ । यति थोरै मात्र गल्ती भएका खसेर ज्यान समेत जान सक्छ । त्यसैले यस कामका लागी पनि लाखौ तलब दिने गर्छन् ।
ब्यक्तिको जन्म समयबाट यसरी थाहा हुन्छ, स्वभाव र भविष्य
कुन राशीसगँ हुन्छ भविष्यमा घट्ने सम्भावित घटनाको बारेमा बुझ्ने क्षमता ?